जब मैले महिनावारी भएको गुपचुप राखेँ | Jwala Sandesh
| प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन ३, २०७६ ::: 468 पटक पढिएको |
आँटी (घरको माथिल्लो तला) को कोठामा सोलारको धिपधिपे बत्ती बल्दै थियो। त्यसभित्र थिएँ म र मेरो महिनावारीको दोस्रो दिन। मेरा नजरहरू दुई सय मिटर पर गोठनिर बसेकी अधवैंशे महिलामा अडिएका थिए। उनको महिनावारीको तेस्रो दिन रहेछ। हामी दुवैको समय, परिस्थिति र शारीरिक अवस्था एकै थियो। फरक यत्ति थियो, म घरको आँटीमा थिएँ, उनी ‘गोरु बाँध्ने गोठछेउ’ परालभित्र गुट्मुटिएकी।
म त्यस दिन छाउपडी अन्त्यकै अभियानमा हिँडेकी थिएँ। छाउपडीले विक्षिप्त कर्णालीकी चेली हुँ म। यही कुप्रथा न्यूनीकरण अभियान क्रममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगै सीमा गाँसिएको दैलेखको गुराँस गाउँपालिका पुगेकी थिएँ।रातभरि मानसिक तनावमा गुज्रिएँ। आफ्नै आँखाअगाडि एक महिला छाउपडी समस्यासँग जुधिरहेको देख्दा पनि मैले केही गर्न सकिनँ। बिहान सबैसँग यसबारे कुरा गर्ने आसमा सुतेँ। बर्खा बेला भएकाले म ब्यूँझिन नपाउँदै सबै आ–आफ्ना काममा लागिसकेछन्। मनमा अफसोच मात्र रह्यो, सायद साँझ नै कुरा गरेको भए ?
साँच्चै एक्काइसौं शताब्दीसम्म नभएको परिवर्तन अब विस्तारै कहिले हुन्छ? कहिलेसम्म कर्णालीका छोरीबुहारी परिवर्तनको बाटो कुरिरहने ?कार्यक्रम सकिएसँगै हामी उकालो लाग्यौं। म त्यो गाउँकै लागि नयाँ व्यक्ति थिएँ। सबै किशोरी मेरै अगाडि-पछाडि झुम्म भएर हेरिरहेका थिए। उनीहरू आफूले भोगेका पीडा सम्झँदै समीक्षा पनि गर्थे।
‘त्यस दिनपछि मैले छाउगोठको घेरा नाघ्ने कोशिस पनि गरिनँ,’ ती बहिनीले मसँग प्रश्न गरिन्, ‘दिदी सहरमा पनि यस्तै हुन्छ ?’उनका यी कुरा सुनेर म स्तब्ध भएँ। प्वाक्क बोल्ने आँट आएन। मुन्टो हल्लाएर बसिरहेँ।
मैले उनलाई नेपालको कानुनले छाउपडीलाई अपराध मानेको छ र सजायसमेत तोकेको छ भन्दै सम्झाएँ। यसै सन्दर्भमा मलाई एक जना आमाले भनेको कुरा याद आउँछ, ‘हामी छाउगोठमा सुत्छौं, प्रहरी कहिल्यै हेर्न आउँदैनन्। कानुन त छ भन्छन् तर सजाय खोइ कसले पायो? गाउँगाउँमा छाउगोठ छन्, किताबमा मात्रै कानुन भएर हुन्छ र ?‘
मैले उल्लेख गरेका यी कर्णाली प्रदेशकै प्रतिनिधि पात्र हुन्। यी सबै वृत्तान्त सुनिसकेपछि मेरो मन-मस्तिष्कले फरक–फरक सवालमा झस्काइरह्यो। मन भन्थ्यो- यो समाजमा सबैले यही रीति मान्दै आएका छन्। तैंले पनि उनीहरूको कदर गर्नुपर्छ। आज तेरो महिनावारीको दोस्रो दिन। फेरि मेरै दिमागले भन्थ्यो- सजना तँ एक अभियानकर्ता होस्। तैले नै सुरुआत नगरे कसले गर्ने?
लेखक युवा अभियान्ता हुन् ।